Izici zemikhiqizo yemvelo yemvelo
Uma ngaphambili igama elithi "organic" lihlotshaniswa ne-chemistry, manje lihlukile. Le ncazelo isiyinto efana neyendalo. Izindlu, izimonyo, indlela yokuphila ngesitayela sezinto eziphilayo zithandwa kakhulu. Njengoba kunjalo, nokudla okuphawulwe okuphilayo. Lezi zimbangi zikhathazeka ngokukhethekile abathengi - kungani ungaboni ama-apula enhle kakhulu kunezindleko ezingaphezu kwalezo ezibeka eshalofini esitolo esivamile? Mhlawumbe ukudla okungokwemvelo kungukudla kwekusasa, futhi yiziphi izici zemikhiqizo yemvelo yemvelo?
Akukho lutho olungathandeki
Ukusetshenziswa kwemikhiqizo yokudla yanamuhla kuphakamisa ukungabaza okukhulu. Amakhomikhali amakhemikhali, izimpumelelo zobuchwepheshe bezakhi zofuzo, ubuchwepheshe obuphambili bokucubungula kanye nezinye izinto ezikuvumela ukuthi uthole ukukhiqizwa okuphezulu ngezindleko ezincane. Ngesikhathi esifanayo, ukwakheka kwawo akuthonywanga ngendlela engcono kakhulu. Izindlela eziphakeme kakhulu zokukhula ezimweni ezingavamile ziphendula ekunciphisweni kwezinhlinzeko ezinezakhi namavithamini. Ukubukeka kwezebhizinisi nokuvikelwa ezilwaneni ezinambuzane - ukufaneleka kwamakhomikhali amakhemikhali, ama-hormone okukhula nama-antibiotic. Lezi zinto zangaphandle zingena ekudleni, futhi nazo zibe emzimbeni womuntu.
Konke ngeke kube yize, kodwa basolwa ukuthi banamandla okubangela ukugula, izinkinga zokugaya ukudla, ukuguga ngaphambi kwesikhathi noma ngisho nomdlavuza. Ngaphezu kwalokho, ukudla okutholakala ngezindlela ezingavamile kubhekwa njengesizathu sokukhuluphala. Njengawo, ayinayo izakhi zomzimba okwanele, ngakho-ke kuyodingeka udle isabelo kabili ngomzwelo wokuzidla.
Isimo sezinto eziphawulekayo zemikhiqizo yezemvelo yemvelo sithuthukiswa yi-hypodynamia nezinkinga zemvelo. Imikhiqizo ye-organic kule mvelaphi ibukeka njenge-panacea yazo zonke izifo. Phela, konke okulandelayo okubizwa ngokuthi "okuphilayo" kukhule ezindaweni ezihlanzekile, ngenxa yobuningi bemikhiqizo yemvelo yemvelo. Izilwane eziya ekuhlatshweni noma ezisetshenziselwa ukukhiqizwa kwemikhiqizo yobisi zidla kuphela ukudla okuphilayo. Futhi akukho ukukhula okuthuthukisayo! Umanyolo we-organic kuphela izinto zemvelo, isibonelo, umquba nomquba. Ekukhiqizeni akuvunyelwe ukusebenzisa ama-pesticides, izindlela zokwenza amakhemikhali, izithako zokwenziwa, izimpumelelo zobunjiniyela bezakhi zofuzo. With izinambuzane zihlukumezeka ngezindlela ezingajwayelekile: isibonelo, endaweni eyodwa, zitshale izitshalo ezahlukene.
Lezi zinhlanzi ziphikisana nezinambuzane ezikhukhumezayo, okungeke zikwazi ukunquma ukuthi zithandani, futhi zithathe umhlalaphansi. Ngakho umkhiqizo uhlala ungalutholi, ugcine ukwakhiwa kwawo okunomsoco futhi akudingeki ukuba uphethwe ngama-pesticides. Lezi zindlela zokukhula zizimele: ngokwenza umthengi athola imifino, izithelo, ngaphandle kwamakhemikhali kanye ne-nitrate. Ngaphezu kwalokho, abacwaningi baseFrance bathi, uma kuqhathaniswa nemikhiqizo engokwemvelo, ama-40% amavithamini acebile namathrekhi; i-antioxidants (izinto ezibhekene nentsha yamaseli) kuzo ngaphezulu kuka-5096. Imikhiqizo yezilwane kanye nemifino ngelebula ethi "eziphilayo" iqukethe amafutha amancane agcwele kanye namafutha amaningi asetshenziswayo namaprotheni.
Kuvela ukuthi ukudla ngesitayela semvelo kuhle kufana nesifomula "Siyilokho esikudlayo".
Futhi kuyadingeka yini?
Kodwa-ke, ukudla okuphilayo akugcini nje ngabalandeli, kodwa futhi nabaphikisi. Kuye kwashiwo izitatimende eziphindaphindiwe emaphephandabeni ukuthi indima yezinto eziphilayo ekulondolozeni impilo kanye nefomu elihle kakhulu. Njengawo, ukukhuluphala, ukuphazamiseka kwemizimba kanye nezinkinga eziningi zempilo akubangelwa yizilondolozi kanye nezibulala-zinambuzane ekudleni. Isizathu esiyinhloko uthando oludlulayo lwabaphila ngesikhathi sokudla okusheshayo namaswidi, ukungabi nenkani ukungahambisani nanoma yikuphi ukunyakaza, ngaphandle kwefriji kuya ku-TV nangemuva.
Abanye bathi izinto eziphilayo ziyingozi empilweni. Bathi uhlobo lokukhiqiza olwenqabelayo luvimbela ukusetshenziswa kwama-preservatives nama-fertilizer amakhemikhali, kanye nezilwane ezondla ngama-antibiotic kanye nama-antihelminthic, okwandisa ingozi yokutheleleka nge-helminths nokutheleleka emathunjini.
Enye itshe ensimini engokwenyama yisitatimende sokuthi leli yibhizinisi elikhulu futhi elinenzuzo. Phela, intengo yemikhiqizo ekhonjisiwe ephilayo idlula izindleko zama-analogue ezingenalutho ngokuphindwe kabili noma kathathu. Abakwa-ecofermers baziphendulela ngokwabo: ukugcina umnotho wezokuhlala, ukuyeka izindlela zamakhemikhali zokucubungula nokusebenzisa umanyolo ofanayo, kudinga izindleko ezinkulu nokuxhumeka kwabasebenzi bomsebenzi. Kodwa ngisho nabaphikisana neziphuzo eziphilayo ngenxa yokuthi le ndlela yokukhula ayikho emthethweni futhi ngaphezu kwalokho - akuyona imvelo.
Akunikezi ithuba lokudla wonke umuntu ngenxa yokuvunwa okuphansi, kodwa kuvela ukuthi kuyabiza kakhulu - hhayi nje ngokusebenza kwabasebenzi, kodwa nemithombo yemvelo. Njengokusebenzisa umanyolo wemvelo kuphela, kubalulekile ukuqoqa izinsalela zazo zonke izinto eziphilayo (izitshalo, izilwane, ngisho nabantu), ukucubungula nokubuyela enhlabathini - futhi lokhu ngeke kusanele uma kuqhathaniswa nezici zemikhiqizo yemvelo yemvelo. Ukwaziswa okusetshenziselwa izibulala-zinambuzane eziphilayo, kodwa hhayi okwamanje, kodwa "okuyimvelo", isibonelo, isulfure nethusi, kubuye futhi. Futhi ayingozi - ayingozi kubantu bobabili nasemhlabathini.
Kodwa-ke, lokhu okukhathazayo akuyona into ehlukumeza kakhulu abalimi be-eco. Ama-supermarket, izindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezihlinzeka ngokudla okunezinto eziphuthumayo neziphuzo, zivela njengama-mushroom ngemva kwemvula futhi zijabulela ukuthandwa okudumile. Ama-flow of the flow flow kanye nabo ngokwabo bayajabula ukuxhuma ekukhuleni kwanoma yini, kodwa ngokuqinisekile imvelo. Ngisho nezidumi zithenga amapulazi futhi zibeke imibhede ngezandla zabo.
Ukunyakaza kwezinto eziphilayo ezweni lethu kwenza kuphela izinyathelo zokuqala ezinamahloni. Nakuba sekukhona izitolo ezinikeza imikhiqizo yemvelo; imigoqo lapho ungakwazi ukuphuza itiye ephilayo. Ngaphezu kwalokho, kunokwenzeka ukuthi kutholakale ukuxhumana namafemu e-eco, asekhona ezweni lakithi, futhi avumelane ngokudiliva okuqondile.
Ochwepheshe bezokudla bayamsekela nemikhiqizo ephilayo: Ngokusho kwabo, banezinhlobo ezincane zemakhemikhali, ngokulandelana, ziwusizo kakhulu kunokudla okungavamile.
Ukujuluka ngokweqile kwezandla nezinyawo: izimbangela, ukwelashwa
Imifino: izinzuzo, ukwakheka kwamakhemikhali
Thenga itshisi lokuvikela elangeni
Izimbangela zokungaphansi komzimba
I-statosis yesibindi: ukwelashwa
Broccoli nge ushizi
Amathiphu ayisishiyagalolunye asebenzayo okubhaliwe ukuthi ungabhala kanjani incwadi yokuvota
Indlela yokukhulisa umqondo wengane yomthwalo wemfanelo?
Ukunakekelwa kakhudlwana kwesikhumba ngobuso nezandla
I-home lamination: iresiphi elula ne-gelatin nesimiso sezinyathelo ngesinyathelo
Gum kusuka ku-rhubarb
Amafutha omgodi ku-cosmetology
Izinkukhu izinkukhu in honey-soy marinade
Indlela yokunakekela kahle i-pink rose
Kanjani kahle ukushisa ilanga kumntwana?
U-Albina Dzhanabaeva waphuma ngendandatho yomshado
UNelli Ermolaeva wabonisa ividiyo yokuzalwa emtholampilo waseMelika